Iindaba zeKate Middleton: Izinto ezi-7 zikaTatler Mag zityhilwe malunga neeDuchess
Kwadla Middleton, okanye uCatherine - njengoko ngoku enqwenela ukubizwa, uKwakhethelwa kobukumkani obuKhulu iiDuchess zaseCambridge ngunina wabantwana abathathu kunye nekamva elizayo Winston Churchill ichazwa njengeyona trone inkulu kwimbali. Kate Middleton.
ukusukela Duke kwaye Duchess yaseSussex uthathe isigqibo sokushiya iRoyal Family Business ngasemva kwaye ajikeleze kwihlabathi lonke ukuze azenze izinto eziphambili, uKate Middleton njengamandla ngaphakathi kosapho lwaseRoyal sele ebonakele ngakumbi. Kumanqaku akutshanje, Imagazini yeTatler nge-scoop ekhethekileyo evela kubakhupheli ngaphakathi kwi-Royal Family yabelane ngezinto ezininzi ekufuneka uyazi malunga ne-Kate.
UCatherine, iDuchess yaseCambridge. Umfoti: UVictoria Jones
Nazi izinto ezisi-7 ezatyhilwa nguTatler malunga neKate Middleton…
# 1. UKate Middleton udiniwe ngumsebenzi owongezelelweyo
UDuke kunye neeDuchess zaseCambridge kunye nabantwana babo, Umfoti: UAaron Chown
Abahlobo abasondeleyo kuye batshilo ukuba uKate uyayiqonda into elindeleke kuye njengasebukhosini, ebonisa imodeli yokukhulisa abantwana bakho ngokulungileyo nokuba ngumzali kwezandla kodwa uxhalabile kukuba umsebenzi owongeziweyo kumaSussex awumvumeli ukuba aqhubeke. neli phupha ngokupheleleyo.
# 2. Uzimisele kakhulu kodwa kunzima ukufunda
Umthombo ongaphakathi kusapho lwasebukhosini uchaze ukuba kunzima kakhulu ukufumana ukuba ungubani ngokwenene. Akukho nto ungayithandiyo okanye uyithandayo ” Utsho umthombo kodwa okucacileyo nangona kunjalo kukuba unalo ithambo lomqolo lesinyithi okanye kubonakala ngathi kunjalo.
# 3. Kule minyaka isi-9 asebukhosini, akakaze anyathele unyawo ngaphandle
UKumkanikazi kunye noKumkanikazi u-Elizabeth II. Umfoti: UPhil Noble
Oku kube negalelo kwisihloko sakhe esibizwa ngokuba nguDuchess UDolittle ngokuzibandakanya kwakhe esidlangalaleni kunye nokudlala kwakhe ngemithetho. Neengubo zakhe zathatyathwa zitshintshe kakhulu ukuze zilungele ubukhosi bakhe. Ukunyaniseka kwakhe kwamkelwa kamva nguKumkanikazi eyamnikeza iRoyal Family Order.
# 4. Ubudlelwane bakhe nosapho bakhe buqinile
UPippa Middleton (L) noCatherine. Umfoti: Clive Brunskill
Uhlala ebeka ulusu lwakhe olunzima kunina Carole. Umsebenzi wegcisa osebenze no-Middleton wakudala wamfumanisa “njengoyena mntu unzima kakhulu kubathengi” kwaye efuna kakhulu phakathi kwezinye iimpawu. Umhlobo we Umoya wedonki, intombi ye-Kate yomntakwabo omncinci James, umfumanisa ukuba uyinyoka eloyikisayo (ngumama kaKate). Ngaphandle kwegalelo likaCarole kwisimo sengqondo sikaKate sangaphandle, enye indlela, uKate uphenjelelwa lusapho lakhe ngudade wabo, Phillippa, owaziwa ngokuba 'nguPippa' ngumfihlo wakhe kunye nomhlobo wakhe osenyongweni.
# 5. Incoko kaKate yaguqulwa
Inkosana uHarry kunye nentombi kaPrince William uKate Middleton. Ifoto ngu-POOL / Tim Graham Library Library
Ngoncedo lweLate Anthony Gordon Lennox, Umtshana ka-Etoni mdala ka-Duke waseRichmond, intetho ka-Kate yatshintshwa xa waba ebukhosini ukuze alingane nenqanaba elifanayo.
Ngoku, xa athetha, kwilizwi lakhe elilungiswe kakuhle, abahlobo bathi isimbo sikaKate sikhulu ngakumbi kunesikaWilliam. Utsho zonke izinto ezilungileyo kodwa luphi uthando? Kungenzeka ukuba oku kukuzikhusela ekubonakala ngathi UDiana, inkosazana yaseWales, ophule uninzi lwezinto zokutya eziqinisekileyo zeFirm kwaye wayehlala ezibona eneemvakalelo ezingathethekiyo, ezinobuthathaka, ezinobuthathaka, kwaye "enobunkunkqele bokucinga." NjengoTatler uthe: "Thixo, uthandwe yiyo."
# 6. Akazange nakanye adibane neeDuchess zeSussex
UCatherine kunye noMeghan, iiDuchess zeSussex. Umfoti: UStephen Pond
Umthombo ngaphakathi kusapho uxele indlela uKate wema kunye nomyeni wakhe uWilliam nangona wayesondelelene noHarry xa uWilliam ecebisa ukuba anciphise isantya solwalamano lwakhe noMeghan.
Emva koko kwabakho isiganeko apho Umtshato kaMeghan ukuziqhelanisa, 'omnye umhlobo wamabango eCambridges'. 'Yayilusuku olushushu kwaye kubonakala ngathi kukho umqolo wokuba abantu abatshada kufuneka banxibe iitights okanye hayi. UKate, elandela imigaqo-nkqubo, waziva kufanelekile. UMeghan wayengafuni ukuba babe. ' Kwifoto nganye, uMeghan wayenendlela yakhe. Kwakukho nesiganeko ngexesha lomtshato apho uKate kwathiwa makakhalimele uMeghan ngokuthetha 'ngokungakhathali' kubasebenzi baseKensington Palace.
# 7. Wenze ubudlelwane obuqinileyo kunye nee-Aristocrat ezazijikeleze yena kunabahlobo bakhe bakudala
IKensington Palace, eLondon, e-UK. Ifoto ngu-Andrew Holt
U-Kate ushukumise ngokulula isizwe sakhe ukuba sijikeleze ngakumbi kubahlobo bakaWilliam, umthombo omnye utyhile- nangona wayegcina unxibelelwano kubahlobo bakhe bakudala eMarlborough.
Nangona iKensington Palace izichithile iiakhawunti zeTatler Magazine 'ukuthubelezelwa kokungachaneki kunye nokuxelwa okungachazwanga okungabekwanga Kensington Palace ngaphambi kokupapashwa', uMhleli-weNtloko yeTaile, URichard Dennen, imi ngale ngxelo ye UAnna Pasternak kunye nemithombo yakhe, bayithetha loo nto “I-Kensington Palace ibisazi ukuba sisebenzisa ikhava 'kaCatherine omkhulu' kwaye sibacele ukuba basebenze kunye kuyo. Into yokuba bayakhanyela ukuba bake bayazi ibubuxoki. ”
Funda inqaku elipheleleyo Tatler.
UCatherine Middleton UDuke kunye neeDuchess zaseCambridge UDuke kunye neeDuchess zeSussex Intsapho yasebukhosini yaseNgilani kate middleton IKensington Palace Meghan Markle isikhulu charles INkosana uHarry Inkosana Williams Tatler usapho lwasebukhosini
NguNwabunie Arah Ngamana 30, 2020
UMeghan Markle kunye neNkosana uHarry Kunikwa Ingxelo Ngabo Bali Kwincwadi ezayo 'Ukufumana Inkululeko'
UHarry kunye noMeghan Markle batyhila umbutho omtsha ongeyona nzuzo wabizwa emva ko-Archie woonyana babo